सुङदुङ छुजाचेनमा पैह्रोले घर पुरियो - Samay Dainik
सुङदुङ छुजाचेनमा पैह्रोले घर पुरियो
June 30, 2019 Samay Dainik
रिनाक, 29 जून।
गत 28 जूनमा आएको भीषण पानीको भलले पैह्रो चलाएर छुजाचेन सुङदुङ निवासी तितश राईको घर पुरेको छ। कुनै ज्यानको क्षति नभएपनि पहिरो अनि भलले घर पुरिँदा सम्पूर्ण सामान क्षति बनेको बताइएको छ। यस घरमा स्व. इच्छाबहादुर राईको जेठा छोरा अनि कान्छी छोरी, साइला छोरा सुवास राई र कान्छा छोरा रामकुमार राईका परिवार बस्दै आइरहेका थिए। उसमध्ये तितस राई माइला छोरा हुन्, जुन घर उनकै नाममा थियो। यसरी आज छुजाचेनका हेल्पिङ ह्याण्ड समूहद्वारा घरको पुनःस्थापना गरिन सहयोग गरियो भने समूहद्वारा अन्य संघ-संस्थाहरूलाई सहयोगको अपील गरिएको छ।
अर्कोतिर, साई समिति संगठन सुङदुङ, योडेस एनजीओद्वारा पनि पीडित परिवारप्रति आर्थिक सहयोग गरियो भने छुजाचेन ग्राम पञ्चायत एकाइको अन्य स्रोत राजस्वद्वारा सर-सामानको नगद राशी रु. दश हजार प्रदान गरिएको ग्राम विकास सहायक अमर गुरुङले बताएका छन्। यस क्षेत्रमा महकुमा अधिकारी रंगेलीलगायत रिगु बीएसीका बीडीओ, आरएमडीडीका अभियन्ताहरूद्वारा निरीक्षण गरिएको थियो।
अहिले सीमा सडक संगठन (बीआरओ) ग्रेफद्वारा सडकको ब्याक कटिङ भएको लिङ्ताम क्षेत्रमा गए राति ठूलो पैह्रो जानले रंगेलीदेखि लिङ्ताम फदामचेन जाने आरएन रोड अवरोध भएको जानकारी रहेको छ। यस रोडलाई खुल्ला गर्न बीआरओ जवानहरू सक्रिय रहेका छन्।
एनआरसी लागू गरेर गोर्खालाई देशबाट खेद्ने खेल हुँदैछः विनय तामाङ
This Year : 90211
Total Users : 90379
Total views : 1139272